အကြီးမားဆုံး LEGO အတွဲများကိုဖြန့်ချိရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 296 Views စာ0မှတ်ချက် 10189, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, ၁၀၂၇၆ Colosseum, 10284 စခန်း Nou, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, art, Creator Expert, လမ်းဆုံလမ်းခွ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, LEGO art, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, Lego Star Wars, ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်, Ninjago, Ninjago City, NINJAGO အမွေအနှစ်, Star Wars
သတ်မှတ်ပြီးနောက်သတ်မှတ်ပါ Lego အုပ်စုသည်၎င်း၏အကြီးဆုံးစံချိန်ကိုချိုးရန်နှစ်သက်သည် Lego list သည်မော်ဒယ်များအဖြစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင်ဆက်လက်ပြောင်းသည်။
အသစ်သောစာရင်းနှစ်ခုသည်အကြီးမားဆုံးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် Lego ဒီလရဲ့အချိန်အားလုံး၊ ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဘောလုံးအသင်းတွေထဲကတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုကျင်းပခြင်းနဲ့အခြားတစ်ခုကငါတို့ကိုမှော်အတတ်နဲ့အံ့စရာနယ်ပယ်တစ်ခုဆီသွားစေတယ်။
ဂရိနိုင်ငံ, Ninjago Cityဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုရဲ့အာကာသကျယ်ပြန့်နက်နဲတဲ့အရာတွေတောင်ရှိသေးတယ် Lego လူတိုင်းအတွက်တည်ဆောက်ပါ၊ သို့သော်ဤအရာသည်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
၈ - လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona
ဤစာရင်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထပ်အဖြစ် ၅,၅၀၉ အုတ်၊ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ဘောလုံးအသင်း၏အထင်ကရအိမ်ကိုပရိသတ်များနှစ်သက်စေမည့်အနုစိတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူဘောလုံးကွင်းအပြင်ဘက်၌၎င်း၊ အသင်း၏နည်းပြဖြစ်သူအားကွင်းအပြင်၌၎င်း၊
အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ Lego တည်ဆောက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးစုဆောင်းသူများကိုပင်စမ်းသပ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်၎င်းသည်အထူးသဖြင့် FC Barcelona ချစ်သူများအတွက်မြတ်နိုးရမည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
7 - ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 Diagon Alley
Wizarding World သည်နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပသည် Lego ဒီနှစ်မှာသတ်မှတ်တာမို့အကြီးဆုံးတွေထဲကတစ်ခုကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အထူးအရေးကြီးပုံရတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ အပေါ်သို့တက်နိုင်သည့်ပုံစံများ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အပိုင်း ၅၅၄၄
မှော်လမ်းတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပြန်ဖွင့်တယ်၊ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley အဆောက်အအုံတစ်ခုစီအတွက်ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပြင်ဆင်ထားသောအတွင်းပိုင်းများမပါ ၀ င်ဘဲသီးသန့် minifigures များနှင့်ဇာတ်ကောင်များစွာပါ ၀ င်သောအထင်ကရနေရာကိုပြန်လည်လည်ပတ်ပါ။ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် ပိုသိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မကြာခင် Gringotts ကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့.
6 - NINJAGO 71741 NINJAGO City ဥယျာဉ်
အမြင့်ဆုံးတစ် ဦး အဖြစ် Lego လွှတ်ပေးရန်အစုံ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် နှစ် 10 ကျင်းပခဲ့သည် Lego Ninjago ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များအတွက်အမှန်တကယ်နေထိုင်သောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအစုတစ်ခုနှင့်အတူ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City.
၅.၆၈၅ အပိုင်းများနှင့် minifigures ၂၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် - အခင်းအကျင်း၏မည်သည့်ပရိတ်သတ်အတွက်မဆိုအဆုံးစွန်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးသင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုနိုင်သည် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် ဤမျှော်စင်အပိုင်း၏လက်မတိုင်းကိုကြည့်ရန် Ninjago City.
5 - Creator Expert ၁၀၁၈၉ Taj Mahal
နည်းသော Lego မော်ဒယ်များသည်၎င်းတို့အားနှစ်ကြိမ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ မူလ 10189 Taj Mahal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ၁၀၁၈၉ Taj Mahal ဘီးကိုအသစ်မဖန်တီးဘူး Lego အဆောက်အ ဦး ကိုသင်ကဲ့သို့အခြားမျိုးဆက်တည်ဆောက်သူများအတွက်အမှတ်တရတည်ဆောက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခုနေနိုင်ပေမယ့် အငြိမ်းစားယူပါကမ္ဘာကြီးသည်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်အတူရှင်သန်နေသည် Architecture ၁၀၁၈၉ Taj Mahalဤအသက်ကြီးသောဖန်တီးမှုသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပုံစံများမွေးမြူထားသောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောမျှော်မှန်းချက်များနှင့်အညီရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
4 - ဟယ်ရီပေါ်တာ 71043 Hogwarts ရဲတိုက်
ငါတို့ပြောခဲ့တာကိုမင်းမှတ်မိနိုင်တယ် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley အကြီးဆုံးတစ်ခုအဖြစ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အတွဲများ၊ ယနေ့ခေတ်အပြင်အဆင်တွင်အကြီးဆုံးကိုကြည့်ပါ။ အလွန်ကြီးမားနေပြီဖြစ်သော Hogw ၏ဤအသေးအဖွဲအပန်းဖြေမှုarts Castle တွင်တက်သစ်စစုန်းမများနှင့်မှော်ဆရာများအတွက်ရည်ညွှန်းချက်အနည်းငယ်ထက်မကပါ ၀ င်သည်။
ရုပ်ရှင်များမှအဓိကအတွင်းပိုင်းနေရာအားလုံးအပြင်ကျောင်းအသီးသီးမှသင်၏သေးငယ်သည့်အချိန်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရဲတိုက်အပြင်ဘက်တွင်နောက်ထပ်အပိုဆောင်းတည်ဆောက်မှုများအပါအ ၀ င် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် အထင်ရှားဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပါ Lego ယနေ့တိုင်ရဲတိုက်များ
3 - Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon
အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့မရဘူး Lego ပြောစရာမလိုဘဲအချိန်အစုံ 75192 ထောင်စုနှစ် Falconအများအားဖြင့်၎င်း၏ ၇၅၄၁ ၏မြင့်မားသောအပိုင်းအရေအတွက်သာမက p ၌ပါ ၀ င်သည်art ၁၀၁၉၇၉ Ultimate Collector's Millennium Falcon ကိုပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားကိုဖန်တီးပေးသောပုံစံ၏အထင်ကရသဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့မှာအပြည့်ရှိတယ် ပြန်လည်သုံးသပ် ဘာ့ကြောင့်ဒီတည်ဆောက်မှုဟာမည်သည့်စုဆောင်းမှုတွင်မဆိုထိုက်တန်သောအရာဖြစ်တာကိုသေချာကြည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ချပါ။ Lego Star Wars ဤအရာကိုသူတို့၏စင်ပေါ်တွင်မရှိသေးသောစုဆောင်းသူများသည်ဖြစ်နိုင်သလောက်အမြန်ဆုံးလိုချင်လိမ့်မည်။
2 - လူကြီးများအတွက် LEGO 10276 Colosseum
အကြီးဆုံးအဖြစ်နန်းချခံရသည် Lego ဖြန့်ချိပြီးမကြာခင်မှာသတ်မှတ် ၁၀၂၇၆ Colosseum အုတ် ၉,၀၃၆ လုံးနှင့်ဒုတိယနေရာကိုပျော်ရွှင်စွာထိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်သည်သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုကိုစစ်မှန်သောအပန်းဖြေမှုတစ်ခုနှင့်အတူရှက်ရန်မလိုပေ ကြောင်အိပ်ရာကိုတော်တော်ကောင်းပုံရသည်.
တည်ဆောက်ရန်အချိန်များစွာကိုဖယ်ထားပါ ၁၀၂၇၆ Colosseum ကျွန်ုပ်တို့၏တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း In-depth ပြန်လည်သုံးသပ်၎င်းသည်ဆုလာဘ်သည်အမြဲတန်ဖိုးရှိမည့်နေရာတွင်စိန်ခေါ်မှု၊ အချိန်များစွာနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြီးဆုံးအရာရှိအတွက်နေရာယူသည် Lego အမြဲလွှတ်ပေးရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းသည်အခြားမဟုတ် Art 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံမရ။ အရွယ်အစားအရအကြီးဆုံးဟုမဆိုလိုပါ Lego Art set သည်အပိုင်း ၁၁,၆၉၅ နှင့်အများဆုံးအပိုင်းများကိုဆက်လက်စီမံနေဆဲဖြစ်သည်arts.
နှင့် အသစ်တည်ဆောက်မှုနှစ်ခု ဥရောပနှင့်ဒိန်းမတ်အတွက် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ စျေးနှုန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအချိုးအစားကိုပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တွင်မြင်သည့်အတိုင်းမည်သည့်နံရံ၌မဆိုအရောင်ထည့်ပေးသည် ရုပ်ပုံသုံးသပ်ချက်မရ။ အကြီးဆုံးတစ်ခုသာရှိနိုင်သည် Lego set နှင့်ထိုခေါင်းစဉ်သည်မူရင်းဖြစ်သည် Lego Art မော်ဒယ်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည်ဤအနေအထားကိုကြာကြာမထိန်းထားနိုင်ပေ.
← LEGO 71395 Super Mario 64 ၏အဆင့်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဘလောက်
LEGO ခြေတုလက်တုကိုစပိန်ကျောင်းသားတစ် ဦး မှပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်သည် →